Juventus Oo Isha Ku Haysa Inay Demiral U Isticmaasho Heshiiska Ay Kula Soo Wareegayso Jorginho
HomeWararka CiyaarahaJuventus oo isha ku haysa inay Demiral u isticmaasho heshiiska ay kula soo wareegayso Jorginho
June 16, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho xagaagan. Xidiga reer talyaani ayaa hal sano oo kaliya uga hartay qandaraaskiisa haatan ee Blues.
Sida laga soo xigtay Calciomercato, Juventus ayaa laga yaabaa inay isku daydo inay ka faa’iidaysato baahida ay Chelsea u qabto inay la soo wareegto beddelka daafaca reer Jarmal ee Antonio Rudiger iyagoo u soo bandhigay Merih Demiral oo qayb ka ah heshiis isku beddelasho ah oo ay ku beddelanayaan Jorginho.
Kooxda ka dhisan Premier League ayaa qarka u saaran inay ka yaraato fursadaha daafaca iyadoo Antonio Rudiger uu ka tagi doono kooxda ka dib marka uu dhamaado qandaraaskiisa 30ka June. 30.Sidaa darteed Blues ayaa la filayaa inay xagaagan xoojiso daafaceeda.
Kooxda Juventus ayaa dhankeeda doonaysa in ay la soo wareegto xiddig kubad ka ciyaara oo khadka dhexe ah. Bianconeri ayaa soo martay xilli ciyaareed niyad jab leh xilli ciyaareedkii 2021-22 iyagoo ku dhameystay kaalinta afaraad ee Seria A, waxaana laga soo reebay Champions League wareegii 16ka ee Villarreal.
Tayo la’aanta kooxda iyo khibrad la’aanta khadka dhexe ayaa loo arkayay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay u dhaceen. Kooxda reer Talyaani ayaa xiiseyneysa saxiixa xiddiga Chelsea Jorginho.